Kaadị akwụmụgwọ maka ịkwụ ụgwọ na ecommerce | ECommerce ozi ọma
Dabere na data kachasị ọhụrụ sitere na Bank of Spain, yana mgbanwe nke 7,38% na ọkara nke abụọ ma e jiri ya tụnyere otu oge nke 2019, kaadị kredit na-egosi mmụba pụtara oke, ma e jiri ya tụnyere kaadị debit, nke bilie 5,35%. Omume nke ga-aga n'ihu na afọ a dị ugbu a, yana aka na azụmaahịa kọmputa, usoro mgbasa ozi dịgasị iche iche nwere kaadị dịka ntọala, nchekwa na asọmpi na-arịwanye elu, ka ndị ọkachamara nyochara.
Ọ dịghị onye nwere obi abụọ na ngwa ọrụ ịkwụ ụgwọ a abụrụla ngwa ọgụ dị ike nke ndị mmadụ nwere ike isi zụta ihe ha na ahịa ma ọ bụ azụmaahịa ọnlaịnụ. Site na nke a, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịmara na plastik ndị a bụ ihe amamihe dị na ya ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ na ịzụrụ na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmahịa n'ịntanetị. Ka ndị ahịa wee nwee ike ịhọrọ nhọrọ a.
Enwere ọtụtụ kaadị enwere ike ịkwado maka ụdị ọrụ a, site na ụfọdụ ndị na-agbanwe agbanwe n'ezie nye ndị ọzọ karịa ot ma ọ bụ ọdịnala. Ebe plastic ọ bụla nwere ike ịdị irè maka mezuo ihe a ọ dị mkpa na dijitalụ dijitalụ ugbu a. N'okpuru usoro a, anyị ga-enye ụfọdụ kredit ma ọ bụ kaadị debit nke enwere ike iji mee ihe, ma ọ bụ opekata mpe uru, na mpaghara azụmahịa kọmputa.
1 Njirimara nke plastik ndị a
2 Na larịị ọnụego ewepụghị
4 Na ụdị ndị ọzọ
5 Nhọrọ ego
6 Kaadị na-eguzosi ike n'ihe
Njirimara nke plastik ndị a
Onyinye bụ isi nke sistemu a bụ na ọ na-enye ndị ji ya ohere ịkwụ ụgwọ ha ịzụrụ na ọnwa 6 ma ọ bụ 12, ọtụtụ oge na-enweghị ụgwọ ọmụrụ nwa ọ bụla, ọ bụ ezie na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, kaadị ndị na-eme ihe ike apụla n'ihe gbasara uru ha na-enye gị ohere ịnwe nzere kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa iji chee mmefu ndị a na-atụghị anya ha. Agbanyeghi na ha nwere onwe ha n’afọ mbu, aghaghi iburu n’uche na ka mmefu ahụ dị elu, ụgwọ a ga-akwụrịrị maka oge niile edepụtara na nkwekọrịta ha, nke nwere ike ịbawanye ogo nke ụgwọ nke ndị ji ha. .
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, usoro ihe ọhụụ nke kaadị ndị a na-etinye bụ site na usoro "ọnụego ọnụego", nke a ga-eji kpebisie ike ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa n'agbanyeghị nzụta ndị emere na, nke a na-ejikarị 30 euro, onye ọrụ maara oge niile ego a ga-akwụ kwa ọnwa.
Na larịị ọnụego ewepụghị
A variant na ịrị elu n'ihe nke na-enye na anoghi n'ulo oba na ego anoghi n'ulo oba na-ere ahịa na-adịbeghị anya bụ kaadị ndị nwere a "ọnụego ewepụghị" agwakọta izute kwa ọnwa mmefu nke ndị ji ha. Modality a bụ nke otu kaadị akpọrọ “na-atụgharị”Na, nke na-ji ha deferred ugwo usoro. I nwere ike iji ha dozie ego kwa ọnwa ịkwụ ụgwọ n'agbanyeghị nzụta ndị emere. Kaadị a dị iche na kaadị akwụmụgwọ klaasị na usoro ịkwụ ụgwọ n'ihi na ọ na-edozi site na ego a kapịrị ọnụ, nke edobere ya site na 30 euro kwa ọnwa dabere na akwụmụgwọ enyere.
Na mgbakwunye, na ụfọdụ n'ime ha ị nwere ike ịnweta akwụmụgwọ na-adịgide adịgide ma ozugbo. Nke a na - emepụta na ndị ji ha nwere ikike ka mma karịa ego ha ga - efu, ma ka ha hapụrụ akwụmụgwọ, ha ga - aga n’ihu na nzụta ha. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ na-eche dị ka nnukwu nsogbu na-akpali akpali maka imefu ego yana, ya mere, ohere dị ukwuu nke ịbanye n'ụgwọ ebe ọ bụ na a manyere onye ọrụ iji ya kwa ọnwa, ọbụlagodi na ha achọghị ọrụ ego a.
Kaadị ndị a nwere akara ngosi nke onwe ha nke na-eme ka ha dị iche na ndị ọzọ, maka njirimara ha na uru ha bara na ndị na-ejide ha yana nke a chịkọtara n'ụzọ doro anya na atụmatụ ndị a na nke a pụtara ịkwụ ụgwọ onyinye:
Ọ na-arụ ọrụ n'ụdị elu na ego gị, nke mere na mgbe ejirila ego ahụ mee ihe, a ga-enye onyinye ọhụrụ na kaadị iji nwee ego ọzọ.
Ntughari ọ bụla nwere ike iburu ọnụ ahịa dị n'etiti 0,50% na 1,00% na ego echekwara, ọ bụ ezie na ụfọdụ ụdị anaghị akwụ ụgwọ a.
A na-eji ha eche ihu ịzụrụ ihe n'ụlọ ahịa ma ọ bụ n'ịntanetị, yana iwepụ ego na ATM, ruo na njedebe nke kaadị ọ bụla (n'etiti 500 na 1.500 euro kwa ụbọchị).
Ha na-enye ndị na-ejide ha mkpuchi mkpuchi na-akwụghị ụgwọ, na-enweghị ụgwọ ọ bụla ọzọ: ihe mberede, enyemaka njem, nchebe megide iji aghụghọ ...
Ha enwerekarị onwe ha n'afọ mbụ na maka mmeghari ohuru, agbanyeghị na ụfọdụ atụmatụ nwere ike ịkwụ ụgwọ n'etiti 3 na 20 euro maka echiche ndị a.
Ọ na-adịkarị mkpa ịjikọ kaadị ahụ na akaụntụ nke ụlọ ọrụ ahụ iji nwee obi ụtọ na uru ya wee bido iji ya.
Enwere ike iji ha dị ka onyinye maka onye ọlụlụ gị ma ọ bụ obere ụmụaka, ma ọ bụ naanị dị ka onyinye agbamakwụkwọ ma ọ bụ kelee onye ị hụrụ n'anya na ụbọchị ọmụmụ.
Na ụdị ndị ọzọ
Enwere ike irite uru ndị a n'ụdị mbelata na ịzụrụ ngwaahịa na ọrụ nke ndị ikwu nke njide nke kaadị ndị a site na kaadị ndị ọzọ. Kedu kaadị ndị ahụ ị nwere ike ịrịọ maka ndị ahụ ịchọrọ ka ha bụrụ ndị na-ejide kaadị. Kaadị ndị ọzọ a ga - ekenye gị ụgwọ kredit gị na nzụta ha ga - egosipụta yana nke gị na nkwupụta kwa ọnwa.
Mana ọ ga-adị mkpa iburu n'uche na ọ ga-eche na a ga-akwụkwu ya ụgwọ maka nnweta na ndozi ya, nke dịgasị iche iche n'etiti euro 15 na 40 euro ihe dị ka otu afọ, ọ bụ ezie na ụfọdụ na-enye ụfọdụ ego a na-akwụ ụgwọ akwụmụgwọ, ọ ga-anọchitekwa obere uru maka ndị na-erite uru ha. Ebumnuche a bụ maka ndị di na nwunye, ụmụaka ma ọ bụ nne na nna nwekwara ike irite uru na ego ndị a na ihe ha zụtara yana ụfọdụ ụlọ ọrụ ego na-etinye aka na ụdị kaadị akwụmụgwọ ha. Ọ nwere ike ịbụ ihe nlere ọzọ na-atọ ụtọ ịchekwa ego n'etiti ezinụlọ site na otu kaadị.
Imirikiti onyinye nke ego a sitere na mpaghara ndị njem (njem, ụlọ oriri na ọ ,ụ restaurantsụ, njem, ụlọ nri, wdg), mana echefughi nhọrọ ndị ọzọ nwere ike ịba uru dị ukwuu maka ndị ọrụ ya yana, site na ntinye mmanụ mmanụ na ịzụta na ụlọ ahịa, na-enweghị ohere ịnweta forfaits ewepu ego n'oge oge snow ma ọ bụ gaa agbụrụ ndị bụ isi nke Formula 1 na ọnụahịa ka mma, ọbụnadị inweta ngwugwu iwu na-akwụghị ụgwọ maka ndị na-ejide ha dị ka atụmatụ ịnabata ụdị kaadị ha.
Financiallọ ọrụ ego ndị ọzọ, n'aka nke ọzọ, na-ahọrọ inye ndị ahịa ha otu klaasị nke na-enye ego zuru oke dabere na ịwelite ego pere mpe ka okwu ndị a toro ogologo. Isi uru ya bụ na ogologo oge dị ogologo, site na 90 rue 800 ụbọchị, mana iji kwenye ka onye ahịa ya nwee ego ọ ga-akwụ ụgwọ n'oge oge ego ahụ ga-adịgide.
N'ụzọ dị otú a, maka oge nke 30, 60 ma ọ bụ 90 ụbọchị, opekempe ego ga-abụ 90 euro, iji nwayọọ nwayọọ mụbaa ruo na iru ogo dị elu, nke n'ime otu afọ nwere ike ịbụ karịa 350 euro na nke kachasị nke ụbọchị 730 ịrị elu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ euro 800. Maka ikpe niile atụgharịrị na mbugharị a, ndị debanyere aha agaghị akwụ ụgwọ ọmụrụ nwa, dịka n'ụdị kaadị ndị ọzọ nwere njirimara na uru ndị yiri ya.
Kaadị na-eguzosi ike n'ihe
Site na ha ị nwere ike nweta ihe ịzụrụ na mbelata ọnụahịa ha nke dị n'etiti 3% na 5%, yana n'ụdị kaadị ụfọdụ ọbụlagodi na mpụga ha, n'agbanyeghị softer bonuses, ọ bụghị ihe karịrị 1%, n'ime atụmatụ azụmaahịa nke enyere ịzọpụta ego a ka ọ bụrụ ihe kacha mkpa iji gbanwere ndị ahịa gị na azụmahịa gị ma ọ bụ ntọala gị.
Ha na-enye ego maka ịzụrụ ihe, n'agbanyeghị na ha nwere nnukwu ọdịmma, nke etinyere n'etiti 18% na 25% yana, yana oge amortization dị mkpụmkpụ, n'etiti ọnwa 6 na afọ 3 kachasị na, na ihe nwere ike ịgbakwunye mmasị maka ịkwụ ụgwọ oge na iru gburugburu 2% ma ọ bụ 5%. N'aka nke ọzọ, a na-ahụ ha karịa ihe niile n'ihi na ha enweghị otu ihe n'ihe metụtara oke ha n'oge afọ mbụ yana mmụgharị ya na-esote, ebe ọ bụ na n'ọnọdụ ụfọdụ, ha nweere onwe ha kpamkpam n'ọnọdụ ndị ọzọ oke nke dịgasị na 10 ruo 40 na XNUMX euro.
N'ikpeazụ, ha bụ ụdị ndị a na-ahụkarị site n'ụdị ndị ọzọ n'ihi na ego ha na-akwụ ụgwọ bụ n'efu n'afọ mbụ, na na ụfọdụ amụma ọ na-abịarute oge ha niile. Dị nnọọ ka ha nwere ọrụ ngosi SMS arụpụtara maka ịkwụ ụgwọ niile ejiri kaadị ha mee maka ọnụ ọgụgụ buru ibu. Dị ka otu n'ime isi njirimara ya. I nwere ike iji ha dozie ego kwa ọnwa ịkwụ ụgwọ n'agbanyeghị nzụta ndị emere. Kaadị a dị iche na kaadị akwụmụgwọ klaasị na usoro ịkwụ ụgwọ n'ihi na ọ na-edozi site na ego a kapịrị ọnụ, nke edobere ya site na 30 euro kwa ọnwa dabere na akwụmụgwọ enyere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Kaadị akwụmụgwọ maka ịkwụ ụgwọ na ecommerce